Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-pianakaviana zafindrafin'ny zaza ao Daw Aye Phyu | Ma Nyunt Nyunt San sy Daw Sapai | Ma San San Nyunt: - Fikarohana momba ny vatana teraka
From: Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny biolojia: ny fandraisana anjara amin'ny Etiology ny fijoroana vavolombelona sy ny fahaterahana, nataon'i Ian Stevenson, MD
Article by: Walter Semkiw, MD avy amin'ny Teraka indray: tranga tany am-boalohany nateraky ny porofo momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny raharaha Xenoglossy notadiavin'i Ian Stevenson
Ny tantaram-piainana taloha momba ny rahavavy Phyu sy Saipai & ny kambana San sy Nyunt: ny rahavavin-teraka ao amin'ny vatana vaovao ho kambana
Izany toe-javatra izany dia ahitana rahavavy Burmese roa izay nivondrona ho rahavavy mirahalahy, izay sary mampiseho ireo fitoviana ara-batana nandritra ny androm-piainany. Satria ny anaran'izy ireo dia mety hampikorontan-tsaina ho an'ireo izay tsy Burmese, dia hanala azy ireo amin'ny fampiasana ity tantara ity, amin'ny fampiasana ny teny farany amin'ny anaran'ny anarany. Amin'izany, ireo anarana hampiasaina dia voafaritra etsy ambany:
Ny Daw Aye Phyu, izay anabavy faran-davanandro taloha, dia antsoina hoe Phyu.
Daw Sapai, anabavy mbola tanora sy efa manambady, dia antsoina hoe Sapai.
Ma Nyunt Nyunt San, ilay kambana manan-kaja, izay voatondro ho taonan'ny fahaterahana indray ao Daw Aye Phyu, dia antsoina hoe San.
Ma San San Nyunt, izay voatondro ho ny vatana vaovao indray ao Sapai, dia antsoina hoe Nyunt.
Ny Aina sy Daw Aye Phyu ary Daw Sapai
Daw Aye Phyu no zokiny vavy ary teraka tany 1869 na 1870, any Seikcho, tanàna Burmese, izay nanana mponina 500. Nanantena ny fanajany ireo tanora kokoa noho izy ary tsy hamela olona hiresaka aminy intsony, izay nahatonga azy ho olo-manan-kaja. Tsy nanambady i Phyu. Maty tamin'ny 1962 izy tamin'ny taona 92.
Ny rahavaviny Daw Sapai dia teraka tamin'ny 1881. Nanambady izy tamin'ny farany, ary niaina toy izany tao Seikcho tahaka an'i Phyu, na dia tao amin'ny trano hafa aza. Nanana zanakalahy antsoina hoe U Htun Su izay sotroina sy filalaovana i Sapai, izay tsy nankasitrahan'ny reniny. Sapai dia nanan-janaka vavy antsoina hoe Ma Nge, izay niantso azy tamin'ny anarana hoe "Min Nge". Maty tamin'ny 1961 i Sapai tamin'ny taona 80.
Ny rahavavy dia Bodista malala-tanana ary nanao fihetsika feno fangorahana, toy ny fananganana toeram-pialofana ho an'ny mpitety fiangonana ary fananganana monasitera kely. Tena nifanakaiky be izy ireo.
Nanana havany lahy izy ireo, U Bo Kay, polisy iray, izay nihevitra ireo rahavavy zokiolona ho nenjehina. Nandritra ny aretina farany dia nikarakara azy ireo i U Bo Kay, nitondra dokotera mba hijery azy ireo ary nividy fanafody ho azy ireo.
Ny rahavavy dia voavolavola ho Twins
Tokony ho roa taona taorian'ny nahafatesan'i Phyu sy i Sapai dia anabavy roa no teraka tao 1964 ho an'i U Bo Kay sy Dwa Thein Yin vadiny, izay hiantso an'i Yin. Nantsoina hoe Ma Nyunt Nyunt San sy Ma San San Nyunt izy ireo. Nyunt dia teraka 20 minitra talohan'ny San. Teraka tao an-tanànan'i Yanaung ireo kambana, izay nanana mponina 5000 ary manodidina ny 4 km avy ao Seikcho. Ian Stevenson dia nino fa ireo kambana ireo dia vady na dizygotic, satria samy manana ny endriky ny endrika izy ireo, na dia tsy natao aza ny fitsapana mba hanamafisana izany.
Nyunt milaza fa avy amin'ny hazo Kokka izy
Rehefa roa taona teo ho eo ireo kambana dia nanontany azy ireo ny reniny Yin,
"Inona no nahatonga anao roa hanelingelina ahy?" (11) Nyunt dia namaly fa avy amin'ny hazo kokka, izay midika hoe hazo akasia. Izany dia nanahiran-tsaina an'i Yin, tahaka ny tsy nisy hazo kokka tany amin'ny faritra nisy azy ireo.
Rehefa roa na 4 taona ireo kambana, dia nisy olona nanonona ny anaran'ny U Htun Su, zanak'i Sapai. Nilaza i Nyunt fa tsy tokony hiditra any Yanaung izy satria "mpiloka" ary "mandany ny fananako rehetra." (12) Yin, nahatsikaritra fa toa mahatsiaro ny fiainan'i Daw Sapai i Nyunt, nanontany azy lehilahy na misy hazo kokka any Seikcho. Nanamafy izy fa nisy izany.
Ny Twins dia Tsaroany ny Anaran'izy ireo Life Life
Tokony ho tamin'ity indray mitoraka ity dia ny kambana ihany no nilaza fa avy any Seikcho izy ireo. Nilaza izy ireo fa nametraka rano ho an'ireo mpandeha. Tadidio fa Phyu sy Sapai dia nanangana fialofana ho an'ny mpandeha, izay mety ho tafiditra tao koa ny fitoeran-drano.
Tamin'ny 1978, tamin'ny taona 5, ireo kambana dia nanome ny anaran'ireo anabavy roa, Daw Aye Phyu sy Daw Sapai, izay toa nahatsiaro ny fiainany. Yin, ny renin'izy ireo, dia nampiseho ireo kambana ireo ny sarin'ireo rahavavy. Nilaza i San fa i Phyu dia azy ary i Nyunt dia nilaza fa ny sarin'i Saipai dia avy aminy. Nilaza i Yin fa matetika no niresaka momba ny fiainany teo aloha ireo kambana, ary toa mifamatotra mafy izy ireo.
Ny fiainana any amin'ny fiainana: Phyu | San manana ny toetoetra mitovy amin'ny Sapai | Nyunt
Voamarika fa ny kambana, San dia nanjary matanjaka kokoa, maivana kokoa ny endriny ary maivana kokoa noho ny Nyunt. Ireo toetra ireo dia mifanaraka amin'ireo anabavin'ireo maty taloha, tahaka an'i Phyu koa dia manan-danja kokoa, maizin-doko amin'ny endrika ary manaitra kokoa noho i Sapai. Ny fahasamihafana dia hoe nandritra ny androm-piainany teo aloha dia i Phyu no zokiny vavy, ary nandritra ny androm-piainany tamin'ny vanim-potoana ankehitriny, dia teraka 20 minitra taorian'ny Nyunt i San, ny vovoka indray vao teraka.
Ny Twins dia mamangy ny fiainany taloha
Ny kambana dia nentina tany Seikcho niaraka tamin'ny ray aman-dreniny ary ny kambana tsirairay dia nandeha tany amin'ny fiainan'izy ireo taloha. San dia nahita fa navaozina ny fiainany taloha ary nitaraina izy hoe: "Rava ny tranoko" (13) Tao anaty trano, raha nahita ny sarin'i Phyu sy Sapai izy ireo, nilaza fa te hitandrina azy ireo.
Nyunt dia nihaona tamin'ny Zandriny ny fiainany taloha sy ny fiainan'ny zafikeliny
Nandritra ny fitsidihan'izy ireo ny tranon'izy ireo taloha, ny zanakalahin'i Sapai, U Htun Su, dia nanatri-maso ny fizotran'ny raharaha, anisan'izany i Nyunt nanondro ny tenany ho Saipai, reniny efa nodimandry. Dia hoy i Nyunt tamin'i U Htun Su: "Tsy te hahita anao aho." (14) Tamin'ny volana novambra 1980 dia nanontany an'i Nyunt i Ian Stevenson, fony enin-taona izy, ny zavatra tsapany momba an'i U Htun Su. Namaly izy hoe: “Raisiko ho zanako izy.” Nanampy izy avy eo fa niloka vola. Nanontany i Stevenson raha namela azy izy. Namaly izy hoe: "Nihoatra ny tsy fankasitrahako azy aho." Mifanohitra amin'izany, nahatsapa i U Htun Su fa tsy sariaka izy roa kambana. (15)
Tao Seikcho, Nyunt dia nahatsapa fankasitrahana lehibe iray rehefa nahita ny zokiny vavy zandriny taloha i Ng Ng. Nyunt avy eo dia nanao izao fanambarana izao:
"Tonga ny Min Nge." (16) Taorian'izay, ireo kambana ireo dia naneho fahalianana mafy tamin'ny fitazonana imbetsaka nentina tany Seikcho ary taoriana kelin'ny fahazazany, matetika izy ireo no nandeha irery. Rehefa nikiakiaka izy ireo, dia nandrahona mihitsy aza izy ireo hiala tao an-trano ary "niverina" tany Seikcho. Nyunt aza dia nanangona ny fananany mba hitondra azy any Seikcho, saingy tsy voasakana ny kambana.
Fitoviana ara-batana: Misy fitoviana marika mampiavaka an'i Daw Aye Phyu sy ny toerany ao amin'ny vovoka any an-kibo, Ma Nyunt Nyunt San, ary eo anelanelan'i Daw Sapai sy ny toerany ao an-kibony, Ma San San Nyunt. Na dia heverina ho ny fifandraisana ara-pianakaviana lavitra eo amin'ny rahavavy sy ny kambana aza, izay mety ho fitoviana eo amin'ny lafiny ara-batana, dia zava-dehibe ny nifanarahan'ireo kambana tamin'ny fiainany taloha teo amin'ny endrika ivelany sy ny toetrany.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ireo rahavavy zokiolona, ​​izay nifanakaiky indrindra, dia niverina indray tamin'ny maha-anabavy roa. Ian Stevenson nanamarika fa ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny niterahany azy ireo dia ny fitiavana. Araka ny nomarihina teo aloha, Ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson nahitana kambana kambana 31 dia naneho fa amin'ny tranga rehetra dia manana fifandraisana lehibe teo amin'ny fiainana izy roa. Ny karazana fialam-boly mahazatra indrindra teo aloha dia ny mpiray tam-po, izay voamarina tamin'ity tranga ity.
Fanomanana ny fiainana: Ireo rahavavy dia tsy hoe vao teraka indray, fa teraka tamin'ny vadin'i U Bo Kay, izay nihevitra ireo rahavavy zokiolona ho nenjehina ary nikarakara tsara azy ireo nandritra ny aretina farany. Tahaka izany, dia toa nisafidy ny hiditra ao amin'ny fianakavian'ny olona iray izay tiany ireo rahavavy avy amin'ny tontolon'ny fanahy,
11. Stevenson, Ian: Ny vatana vaovao sy ny biolojia, Contribution to etiology of birthmarks and birth defects, Volume 2, Praeger, 1997, page 2020